Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Nigeria Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekadii oo dhammaystiran oo ah Kubadda Cagta Nigeria oo loo yaqaan "Vic". Sheekadeena Taariikhda Carruurnimada Victor Osimhen Plus Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Sare u qaadida Victor Osimhen. Dhibcaha Sawirka: Vanguard, NigerianNewsDirect iyo Twitter
Haa, qof walba waa ogyahay inuu yahay a weeraryahan heer sare ah oo hibo leh goolal qurux badan. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa tixgeliya taariikh nololeedka Victor Osimhen kaas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Laga bilaabo, Magacyadiisa oo buuxa waa Victor James Osimhen. Victor Osimhen sida uu inta badan u yeero wuxuu ku dhashay the Maalinta 29 ee Diseembar 1998 hooyadiis iyo aabihiis, Elder Patrick Osimhen oo ku nool magaalada Lagos, Nigeria. Wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay lix carruur ah oo ay dhaleen waalidkiis jecel oo sawirkan hoose lagu sawiray.
Victor Osimhen Waalidka- Aabihiis- Waayeel Partick & Marwo dambe. Sawirka Sawirka: NigerianNewsDirect iyo IG
Waalidiintii Victor waxay asalkoodu ka soo jeedaa Koonfurta Nigeria si sax ah Esan South East Local Government Local of Edo State in Nigeria. Magaca qoyskiisa oo ah “Osimhen"Waxaa loola jeedaa 'Ilaah waa wanaagsan yahay'afka hooyo ee Ishan.
Sida ciyaartoy badan oo caan ah oo ku sugan Koofurta Nigeria, Victor Osimhen wuxuu ka soo jeedaa qoys liita. Kahor intuusan dhalan, waalidkiis waxay goaansadeen inay u guuraan magaalada “Lagos"Caasimada dhaqaalaha ee Nigeria. Xitaa intii ay ku sugnaayeen Lagos, qoysku waxay la kulmeen dhibaato, mid ka qaniintay gabadha yar ee Victor, ka dibna socod-baradka ah, waxaa loo sameeyay inay ku wajahdo qorrax kuleylka taraafikada ee magaalada Lagos halkaas oo hooyadu ay ku iibin jirtay biyo nadiif ah si ay ugu kabto dakhligeeda caafimaad.
Victor Osimhen wuxuu ku barbaaray walaalkiis Andrew iyo 4 walaalaha kale ee Olusosun, a beel yar oo ku xeeran Oregun, Ikeja, Lagos. Bulshadani waxay martigalisaa mid ka mid ah qashin-qubka ugu weyn ee Afrika. Markii uu ku barbaaray noloshiisa qaan-gaarnimo, Victor Osimhen wuxuu huuriyay oo quusiyay biyo xashiish ah iyo badeecooyin kale oo reerka ah oo ku yaal wadooyinka si lacag loogu aruuriyo waxbarashadiisa iyo badbaadada qoyskiisa.TheNationOnlineng Warbixinno).
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Dugsiga hoose ee Olusosun oo uu ka qaybgalay ayaa u ahaa bar kulanka kulanka kubada cagta ee dhammaan ardayda dugsiga iyo dhallinta da'da yar ee bulshada.
Dugsiga hoose / dhexe ee Olusosun- Halkaasoo safarka kubbadda cagta uu ka biloowday. Dhibcaha: LagosSchoolsOnline
Fiid walba, wiilal fara badan oo uu ku jiro Victor ayaa taga garoonka kubada cagta si ay u daawadaan walaalkiis ka weyn oo ahaa xiddig kubbadda cagta maxalliga ah. Curadkii ugu horreeyay qoyskooda oo magaciisa la yiraahdo Andrew wuxuu ka tegey waxbarashadiisa si uu u helo lacag uu ku daryeelo Victor iyo walaalihiis kale.
Kaaliyaha barafka, Victor wuxuu kaloo bartay kubbadda cagta isagoo uga mahadcelinaya walaalkiis weyn, Andrew. Wuxuu sidoo kale aad u jeclaa Chelsea FC sida uu u daawaday kooxdu markay ku ciyaareysay xarumaha daawashada. Isaga iyo xubnaha qoyskiisa waxay ahaayeen taageerayaal aad u weyn kooxda Nigeria (Super Eagles). Taageerada kooxda oo ay weheliso jaceylka uu u qabo cayaaraha ayaa abuuray rabitaanka ah inuu noqdo xirfadle.
Markuu arkay in walaalkiis ka yar yahay qof karti badan, Andrew wuxuu ku qasbanaaday inuu iska daayo ciyaarta si uu uga hor tago ganacsigiisa wargeys. Wuxuu kaloo iska fogeeyay fikirka ah inuu sii wado waxbarashadiisa si uu lacag ugu ururiyo si uu uga caawiyo walaalkiis yar oo uu kaxaystay inuu noqdo superstar.
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Waqti uma qaadanin kahor intaan riyada qoysku bilaabin inay bixiso iyadoo dadka indha indheeya kubada cagta maxalliga ah ay ogaadeen wax gaar ah oo ku saabsan Victor ka dibna waxay ku casuumeen Ulitmate Strikers Academy oo ku taal Lagos halkaas oo uu ku qaatay tijaabadiisii ​​ugu horreysay ee guuleysata.
Sannadkii 2014, waxqabadka Victor Osimhen ee Ultimate Strikers wuxuu arkay isaga oo martiqaaday coach Amuneke inuu matalo dalkiisa U-17. Fiiro gaar ah: Kooxda Kubadda Cagta Nigeria ee U-17 ee loo yaqaan Golden Eaglets, waa kooxda ugu da’da yar ee ka mataleysa dalka Nigeria kubada cagta. Victor Osimhen wuxuu gacan weyn ka geystay ka caawinta kooxda inay u qalmaan U-17 FIFA World Cup oo lagu qabtay dalka Chile.
Tartanka 2015 FIFA U-17: Victor Osimhen wuxuu ku biloowday bilow wanaagsan tartankan madaama uu dhaliyay labo gool oo heer sare ah kulankaan, isagoo ku guuleystay malaayiin qalbi ah oo ay ku jiraan kuwa reer Yurub ee indha indheeya ereyga. Osimhen wuxuu door muhiim ah ka qaatay guushii Nigeria U-17 ee Koobkii Adduunka ee FIFA lagu qabtay Chile. Isagoo ka caawinaya dalkiisa inuu ku guuleysto tartanka, xiddiga reer Nigeria ayaa sidoo kale qaatay abaalmarinta gooldhaliyaha ugu sareeya ka dib markii uu dhaliyay goolal 10 iyo sidoo kale FIFA U-17 Koobkii Adduunka ee Koobka Adduunka.
Victor Osimhen wuxuu haystaa FIFA U-17 Koobka Aduunka Dahabka dahabka ah iyo Kubadda Dahabka ah. Dhibcaha: Jumiya iyo Xilliyada Hundustant
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
Koobkii Adduunka ka dib, waxaa la shaaciyay in kooxo waa weyn oo ka socda Yurub, sida Arsenal, Man City, iyo Tottenham Hotspur, ay ka dambeeyeen adeegiisa. Si la yaab leh, Victor Osimhen wuu diiday dhamaan dalabyada sababtoo ah koox kale oo dheelliga dhexe ah ayaa siisay lacagtii ugu badneyd.
Waqti yar kadib markii loo magacaabay 2015 Dhallinyarnimada Afrika ee abaalmarinta CAF Awards ee Abuja Janaayo 2016, Osimhen wuxuu adduunka u sheegay inuu sii wadi doono shaqadiisa xirfadeed ee kooxda Jarmalka Bundesliga, Wolfsburg. Sida laga soo xigtay isaga, dammaanad qaadka kooxda iyo lacagta ayaa ah mid qoyskiisa u horseedeysa niyad xumo iyo inuu doorbido inuu u ciyaaro kooxda Jarmalka halkii uu ka ciyaari lahaa Yurub oo dhan.
Xanuunka Jarmalka: Osimhen wuxuu saxeexay heshiis seddex sano iyo bar ah oo ka horreeya qandaraas ilaa iyo bisha Juun 2020 wuxuuna kulankiisii ​​ugu horreeyay u saftay kooxda reer Jarmal ee bishii May 2017. Ka dib afar bilood oo uu saftay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Bundesliga, dhibaatooyinku waxay bilaabeen inay ku soo dhowaadaan qofka reer Nigeria. Dhaawac garabka ah ayaa ku qasbay inuu galo qaliin taasoo keentay dhamaadka xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay. Ku dhammeystirka heerkan liita, Victor Osimhen (sawirka hoose) wuxuu noqday mid aan laga garan karin koox sare.
Victor Osimhen wuxuu u muuqdaa mid rajo qaba sida uu ula halgamayay dhaawacyada iyo jirada Jarmalka. Xigasho Twitter.
Riyooyinka Osimhen ayaa sii socday ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawaca garabka. Markan, waxay ahayd cudur kaas oo la wareegay, taasoo ka dhigtay inuu seego xilli-ciyaareedkii hore oo aad u xanuun badnaa, isagoo ka maqnaa xulalkii Nigeria ee xulalka adduunka ee 2018 koobka adduunka. Ma ogeyd?… Wuxuu ku jiray cisbitaalka waqtiga Russia 2018 FIFA World Cup.
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Kusoo sharax sheekada
Waxay ku qaadatay Osimhen qiyaastii 2 xilli xanuun badan inuu ka soo baxo riyooyinkiisa. Isku dheellitir la'aanta ka dhaceysa dhaawaca iyo jirrooyinka ayaa arkay isaga oo dhaliyay goolal eber ah (0) oo Wolfsburg ah sidaasna ku burburiyey shaqadiisii ​​nidaamka.
Isagoo dhaqaaqaya, Osimhen wuxuu go'aansaday inuu ka qeyb galo tijaabooyinka xagaaga iyadoo lala xiriirinayo naadiyada Belgian Zulte Waregem iyo Club Brugge, kuwaasoo waqtigaas ahaa kooxda difaacaneysa. LA SOCO, Caafimaadkiisa ayaa ku dhacay dhagaxa ugu hooseeya madaama uu ku dhacay cudurka duumada taas oo saameyn ku yeelatey xaaladiisa jir ahaaneed oo ka dhigtay labada naadi inay diidaan
Markay ahayd 22 Agoosto 2018 waxay ahayd taariikhda ilaahyada kubada cagta u naxariistay isaga. Waxay ahayd maalintii kooxda reer Charleroi ay ka aqbashay amaah hal xilli amaah ah. Victor Osimhen wuxuu ciyaaray kulankiisii ​​ugu horeysay 22 Sebtember, isagoo dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay isagoo xirfadle ah oo kubad cirib ah. Ciyaarta ka dib, Osimhen ayaa u sheegay BBC Sport in uu lahaa “helay farxaddiisa mar kale sugitaanka dheer kadib".
Victor Osimhen wuxuu ugu dambeyntii helay farxaddiisa kadib sugitaan dheer oo dheer. Ku mahadsanid Goal
Qofka reer Nigeria ee bukaanka ahi wuxuu si guul leh ula soo qaatay kooxda reer Belguim, isagoo ciyaaray 36 kulan isla markaana dhaliyay goolal 20, oo ah muuqaal ay sameeyeen kooxdiisu, Charleroi, kuna dhiirrigelisay ikhtiyaarkeeda inay ku helaan intii ay amaah ku jireen. Ka dib markii uu kubada cagta ka qabtay Belgium, xiddiga reer Nigeria wuxuu dareemay inay tahay waqtigii ku habboonaa ee uu jidkiisa dib ugu laaban lahaa isagoo ah hogaamiye weeraryahan Afrikaan ah oo uu mar ahaan jiray. Bishii Luulyo 2019, wuxuu ku dhaqaaqay kor u qaadis xirfadiisa isagoo saxiixay Lille OSC.
Victor Osimhen Rise to Sheekada Fanka. Astaanta Sawirka: Goal
Halkii lagu burburin lahaa dhaawacyada garabka iyo duumada, weeraryahanka reer Nigeria wuxuu ka koray xoog iyo xoog, adkaysi u yeelitaan sare ilaa heer sare si uu u noqdo LA SOCO, mid ka mid ah guryaha ugu fiican Afrika. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Xiriirka
Ka dib markii uu caan ka noqday Yurub, waxaa hubaal ah in inta badan taageerayaasha ay weydiin lahaayeen haddii Victor Osimhen, sida waqtiga qorista, uu leeyahay gabar saaxiib ah.
Waa kuma gabadha Victor Osimhen? Sawirka Sawirka: IG
Ma jirto wax dafiraya xaqiiqda ah in sifooyinka soo jiidashada leh ee Osimhen ay ka mid yihiin qurux, daacadnimo, shaqo adag iyo is-hoosaysiin aysan ka dhigaynin mudanayaashu inay aaminsan yihiin inuu sameyn doono saaxiib wanaagsan.
Ka hor intaadan caan noqon, waxaa la sheegay in Oshimen uu ku taariikhaysan hablo qaali ah oo magacooda loo yaqaan 'Blessing'. Intii lagu jiray mudada xiriirkooda, labada jaceyl waxay si joogto ah u wadaageen sawirrada ay ku wadaagaan Instagram. Xiriirka la sheegay Osimhen ee lala wadaagayo saaxiibtiis waxaa la shaaciyey muddo ku siman 2 sano ka hor inta uusan go’aansan inuu ka tirtiro raadkeeda midkasta oo ka mid ah gacantiisa warbaahinta bulshada.
Gabar Victor Osimhen
Tan iyo markii macluumaadkeedii lagu tirtiray warbaahinta bulshada, warar xan ah ayaa sii jira, kuwaas oo sheeganaya in Blessing aysan ahayn saaxiibbadii Osimhen laakiin ay ahayd xaaskiisa la khiyaaneeyey. Adigoo hubinaya qaabkiisa warbaahinta bulshada, ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan arooskiisa la sheegay ama guurkiisa barakeysan. Si kastaba ha noqotee, wali waa suurta gal in laga yaabo inuu guursado iyada laakiin waxa uu door bidaa in uusan shaacin.
Sida wakhtigii qorista, Osimhen wuxuu umuuqdaa mid kaligiis ah wuxuuna doorbiday inuu diirada saaro mustaqbalkiisa halkii uu ka raadsan lahaa gabar saaxiibtinimo ama xiriirka bulshada ka dhexeeyo.
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Inaad barato Victor Osimhen Nolosha shaqsiyeed ee ka fog kubada cagta waxay kaa caawin doontaa inaad sawir wanaagsan ka hesho shakhsigiisa. Laga soo bilaabo, waa qof yaqaan macnaha dhabta ah ee badbaadinta iyo adkaysiga, farriinta had iyo jeer ku jirta bartiisa muuqaal ee Whatsapp.
"Sinaba looma carqaladeynin qaar ka mid ah faallooyinka iyo waxyaabaha xun ee laga qoray aniga waqtigeyga Wolfsburg,”. Mar labaad, ereyadan isaga ah, waxaad si fudud uga jari kartaa inuu isagu yahay dagaalyahan.
Marka laga soo tago kubada cagta, Osimhen wuxuu jecel yahay dhageysiga muusigga R&B muusigleyda uu jecel yahay ee wali harsan “Waxaan aaminsanahay inaan duuli karo”, Ciidda orodka garaaca ee xiddig muusig R Kelly. Mararka qaar, wuxuu ku heesaa heesta Kelly qaabkiisa gaarka ah inta lagu gudajiro dabaaldegyada himilooyinkiisa. Aagga muusigga maxalliga ah ee Nigeria, Osimhen wuxuu ku dhegan yahay Olamide iyo raadkiisa uu ugu jecel yahay farshaxan-yahanka reer Nigeria ee hip-hop waa 'carshiga ku fadhiya '.
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Qoyska
Victor Osimhen, oo ah qofka sida wadaaga ah ee qoyskiisa ayaa ku faraxsan inuu been abuuray dariiqa qoyskiisa ee madaxbanaanida dhaqaalaha dhamaanteed mahadsanid kubada cagta. Dhamaan xubnaha qoyska (sida hoos ku xusan) oo garab taagnaa muddadii uu mugdi ku jiray ayaa hadda ku raaxeysanaya fikir buuxa oo ay kubbadda cagta xirfadluhu keenaan.
Xubnaha qoyska Oslohen Victor Osimhen. Amaahda NigerianNewsDirect
Ku saabsan Victor Osimhen Aabaha: Pa Patrick Osimhen waa waalidka kaliya ee aabihii dhalay iyo aabihii dhalay Victor Osimhen. Wuxuu mar ahaa maamulaha wiilkiisa ilaa 2015 markii uu ku wareejiyey mas'uuliyadda mas'uuliyadda maamulka wakiilka Faransiiska Oliver Nuux oo ka tirsan Maareeyaha Isboortiga ee Noga.
Victor Osimhen Aabihiis (kan labaad dhanka midig), wiilkiisa iyo kooxda Maareynta Ciyaaraha ee Noga. Ku mahadsanid AllNigeriaSoccer
Markii Patrick Osimhen uu ahaa ilaaliyaha sharciga ah ee wiilkiisa, wuxuu la orday arimo la xiriira wakiilo kale oo isku dayay inay ka gudbaan si ay lacag ugu helaan ka soo wareejinta wiilkiisa Wolfsburg. Dadkani waxay isku dayayaan inay ka gudbaan, waxay doorbidaan inay la macaamilaan wiilkiisii ​​hore, Andrew Osimhen oo ku saabsan wadahadalada qandaraaska ee Victor Osimhen.
Ku saabsan Victor Osimhen hooyadiis: Sida ay sheegayaan wararka, waxay umuuqataa in hooyada Victor Osimhen ay soo daahday. Weeraryahanka reer Nigeria ayaa xilligii uu qorayay maamuusay hooyadiis isagoo sawirka ka qaaday sawirkiisii ​​muuqaalka bartiisa Instagram-ka.
Hooyo Victor Osimhen hooyadeed. Ku amaanto barta Instagram
Walaalaha Victor Osimhnen: Victor wuxuu leeyahay lix walaalo wadarta ah Andrew Osimhen wuu ka caansan yahay mid kastoo walaalihiis ah. Jacaylka Victor Osimhen ee walaalihiis malaha xad. Ma ogeyd?… Wuxuu mar qudha u hibeeyay Abaalmarintiisa Kabaha Dahabka ah mid ka mid ah walaashiis ka dib markay umushay gabar dhasho kaliya waqtigii uu ku guuleystay abaalmarinta, qiyaastii Noofembar 2015.
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - nololeedka
Sida wakhtigii qorista, qiimaha suuqyada ee Victor Osimhen ayaa kor uga kacay 13,00 mil. € sida laga soo xigtay Suuqa Kala Iibsiga. Sida lagu arkay gacantiisa warbaahinta bulshada, lacagtani waxay ku bixineysaa qaab nololeed qurxoon oo si fudud looga garan karo baabuurta aadka u fiican, guryaha guryaha iyo mararka qaarkood gabdhaha.
Victor Osimhen wuxuu ku nool yahay hab-nololeed fudud. Ku amaanto barta Instagram
Markaad dib uga fiirsato dhaqankiisii ​​foosha xumaa iyo qoyskiisii ​​xumaa, waxaa hubaal ah in Osimhen ay tahay in si wanaagsan loo sal galiyo oo uu ogaado sida loo maareeyo lacagaha.
Taariikhda Dhalashada Victor Osimhen Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Khilaafka Qoyska: Mustaqbalka Victor Osimhen ayaa mar qudha jahwareer la geliyay ka dib khilaaf qoys oo ka dhashay wareejinta. Xubnaha qoyskiisa waxay ka soo horjeedeen midba midka kale kaasoo matalaya ciyaaryahanka.
Sida ay sheegayaan wararka khadka tooska ah, adeerka Osimhen, Michael, wuxuu mar hogaamiyaa koox wakiilayaal ah halka Andrew, oo ah odayga hore ee kooxda kale. Labada kooxba waxay lahaayeen wakiiladooda u dagaallama lacagaha la xawilo iyo xuquuqda saxda ah ee matalaya ciyaaryahanka. Xiisadda qoysku waxay yeelatay waji cusub markii ay sidoo kale warbaahinta soo baxeen warar sheegaya in aabihii Osimhen uu garaacay tuugo markii uu diiday inuu aqbalo u dhaqaaqida ciyaaryahanka ee Wolfsburg. Markii dambe ayaa loo gartay inay been tahay. Waxay qaadatey waqti kahor inta uusan dhibaatada qoysku dhammaan.
Naadiga Kubbadda Cagta ee Nasiib-darrada Naadiyada Nigeria: Bishii Janaayo 1, 2017, Victor Osimhen waxaa loo wareejiyay $3,970,225 ilaa kooxda Jarmalka VfL Wolfsburg oo ka socota Ultimate Striker Academy, oo ah naadi maxalli ah oo kuyaal Lagos.
Ma ogeyd?… Lacagta wareejinta ayaa ka dhigtay mid ka mid ah ciyaartoydii ugu qaalisanaa ee si toos ah loogala soo wareego koox xanaano oo ku taala qaarada Afrika kuna biiro koox ka dhisan yurub ugu sareysa. Xisaabinta sicirka sarrifka sida waqtigii qorista, akadeemiyada Ultimate Strikers ayaa ka heshay lacag dhan 1.4 bilyan oo doolar wareejinta Victor Osimhen.
Waa maxay sababta uu ugu fiicnaa Belgium: Dad badan oo reer Nigeriya ah ayaa doorbida inay xirfadooda Yurub ka bilaabaan Qaybta Koowaad ee A. A. Horyaalkaani wuxuu u ahaa Meel loogu talagalay ciyaartoydii reer Nigeria sanadihii lasoo dhaafay waana midka u horseeday Victor Osimhen guushii uu ka gaaray kubada cagta Yurub.
Ma ogeyd?… Tababarihii hore ee Nigeria ee gorgorka ee dabayaaqadii Stephen Keshi kaas oo runtii horseed ka noqday duulaanka hibada reer Nigeria ee buuxinta Belgium dhamaadka 1980s. Xiddigaha sida Daniel Amokachi, Victor Ikpeba, Sunday Oliseh iyo Alloy Agu dhamaantood waxay shaqadooda ka bilaabeen Belgium. Xusuusnow: waxay ahayd markii uu ku sugnaa Belgium Celestine Babayaro oo ku guuleystay abaalmarintiisa Ebony Shoe oo uu ku muteystay ciyaaryahanka ugu fiican Afrika ee horyaalka Belgium.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada sheeko ee Taariikhda Caruurnimada Victor Osimhen iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Wilfred Ndidi Sheekada Carruurnimada Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Odion Ighalo Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta
Jay-Jay Okocha Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weyn
Nwankwo Kanu Sheekada Carruurnimada Xaqiiqda Raadinta Warka Xogta
Kelechi Iheanacho Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawirka
Ahmed Musa Carthouse Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta
Victor Moses Story Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan